Amehlo anamehlo anemibala amaninzi ayengabonwa ngentshisekelo okanye into engavamile. Kodwa kaninzi kangakanani ufanele uhlangabezane nemibala eyahlukeneyo ye-iris yamehlo kubantu? Nangona u-ewe, mhlawumbi, wacinga ukuba umdluli-ngee-lens zembala eyahlukileyo, kuba le nto yinto eqhelekileyo phakathi kwabantu, ngakumbi kubantu abaselula. Kubonakala ngathi yinto engakholekiyo, kodwa, ngokwenene, ngumlinganiselo wobuqu bomntu ukusuka kwabanye. Kodwa ngaba kunjalo kuphela? Mhlawumbi ke, mhlawumbi akunjalo. Awuzange ufune ukudibana nomntu onjalo, jonga amehlo akhe, kwaye ngokukhawuleza uza kubona kubo inyaniso ethile okanye lo mntu unamakhono angaphezu kwamandla. Ndiyamangalisa, akunjalo?
Ndiyazibuza ukuba umntu onokungafani njani nabanye aziva njani? Ngokuqinisekileyo, "ukungavumelani" abantu banomuva obunzima, beqonda ukuba bahluke kwabanye, nokuba nje kuphela. Kwaye thina, abantu abaqhelekileyo, sijonge kubo nakwezinye iindawo ezingqondweni zethu, kwaye, mhlawumbi, ngokucacileyo ukuba bayayithanda. Umnqweno womntu ukuma oqhelekileyo, ngoko, umnqweno wokuba "kwindawo eyahlukileyo" kuye ulungile. Siya kugqiba, ungabi namahloni ngenxa yeempawu zabo ezahlukileyo, ngokukodwa kuba abaninzi, njengoko bathi, zama ukuphinda ufunde into enje, usebenzise ezinye iindlela.
Nangona kunjalo, ngaba kunjalo, ngaba abantu abanamehlo ahlukileyo abayithandi ngokwenene? Kukho izinto ezininzi ezityhila iingcambu zomntu kumacandelo ahlukeneyo - i-meleosophy, ukufunda izalathisi zokuzalwa emzimbeni womntu, ifilosofi, ingqondo, i-physiology, i-biology, palmistry kunye nezinye iikhombandlela, ngoko ayifani. Ukungafani kwakungekho umzamo wokubonakalisa umntu ngombala wamehlo akhe. Iimononi zamanqaku ezichaza abantu abanobundu obomdaka, obuluhlaza, obuluhlaza. Kuthiwani ngomntu onemibala engafaniyo? Masiqonde ukuba umbala wamehlo ohlukileyo uthetha kubantu!
Ukuzalwa kunye nokufumana "ukungavumelani"
Kwizenzululwazi, iimeko zabantu abanamabala amaninzi babhekwe kwiinjongo zofuzo kwaye kuthiwa i-heterochromia - umbala obalaseleyo we-iris kweliso elinye kwelinye. Ingumphumo wokugqithisa okanye ukungabikho kwe-melanin. Kodwa kukho "ukungavumelani" okufunyenweyo, umzekelo, ngenxa yexinzelelo, kubantu abane glaucoma okanye ngeesisu.
I-Psychological portrait yabantu abanemibala eyahlukeneyo yombala
Abantu abanjalo babonakala njengobuntu obungenasoyikayo, obungenakulinganiswa nabangenasimo. Ziyamkela ngokuphangaleleyo. Ngokuchasene nemvelaphi yale micimbi emihle, kukho into ecacileyo engafanelekanga - egocentrism ngendlela echanekileyo. "Kwenzeka njani ukuba abazange bandincede?". Ngama-egoists kunzima kakhulu ukudibanisa, badinga ukunakwa okungaphezulu. Kodwa nantsi into ephazamisayo, abantu abanemibala eyahlukileyo ye-iris, njengokuba yedwa. Kuyinto engaqhelekanga, akunjalo? Nangona oko kuya kumangaliswa? Ngokuchasene nale mvelaphi, banesiqulatho esincinci sabahlobo abaxabisekileyo nabathandekayo. Ewe, kodwa ungayiqondi njani abo banyamezelayo baze bamkele ukuzingca kwenu?
Ukuphefumlelwa kweyona nto
Abasetyhini - "ukungavumelani" balwela ukulungelelanisa. Umgaqo-siseko unokuba lukhulu, kaninzi uthabathe ukutya. Nangona kunjalo, oku akubathinteli ukuba banandipha imbonakalo yabo, nje "akukho mda wokuphelela." Abafazi - banqabileyo ngokwemvelo, njengombongo, umculo, ukudansa, kakhulu.
Ishedyuli yobomi ayinyani, ukuba kukho iziganeko eziqaqambileyo, akunqabile. Enyanisweni, ayinakucaphukisa ngokukhethekileyo, ngokuchaseneyo, ibangela ukuba bayayixabise into abanayo kwaye bayakukhunjulwa ixesha elide kwimemori. Baye bakwazi ukulungiselela iholide ngokwabo kwaye bakwenze, ngenxa yemisebenzi yabo yokuhleleka kunye nokucinga.
Izimpawu ezintle ziquka umonde nokunyamezela. Unokuba ungazi malunga neengxaki zabo - zisasaza iinkxalabo okanye ukunganeliseki kuphela xa kufikelelwe iphuzu lokubilisa. Kwaye ke, kuphela abasondeleyo bayazi. Abafuni ukunqumla ngaphezu kweentloko zabo, banelisekile ngesimo sabo samanje.
Kubudlelwane, ekuqalekeni, emoyeni, kodwa ukuba "ukungavumelani" kunye nokukugxotha, kungenxa yokuba yena akuyena yedwa kwaye uyingqayizivele, kwaye kukho ininzi enjalo. Xa uyifumana enye, iya kuba "yithandana ethuneni", kunye neenguqu zokukhawuleza zokuziphatha. Kuya kubonakala ukuba, kubonakale, kwintombazana ekhuselekileyo yindwendwe enomdla oza kuhlala exhasa induduzo endlwini, unomnqweno wokwabelana ngobulumko obuncedo. Ungaphuthelwa iziphulo ngeendlebe. Amadoda angamaqabane anjalo angaba nomona, kuba yonke into egobileyo iya kugqitywa ngokupheleleyo kwelinye icala - "liya kuhlala kumntu wakho."
Ngoko, ukongeza kwinto yokuba intombazana leyo iya kuba yindoda enomdla kakhulu, umfazi onenkathalo, yena, ngokwenene, akayi kukulibala ukulandela ukubonakala kwayo. Kukho na umntu, kubonakala kum, lo ngumfazi ofanelekileyo. Enyanisweni, zikhona iimpawu indoda engayamkelayo, kwaye mhlawumbi ikwahlukana, akukho. Abafazi "ukungavumelani" banomdla wokusela, kodwa, ngenxa yengqondo yabo, bayakuphepha. Kodwa ukutshaya, emva kokuzama kanye, kunokwenzeka ukuba abayi kuze bakwazi ukuyeka.
Abantu abanamehlo anombala abonakaliswe ngenkani kunye nokuqonda, musa ukulibala malunga nalo. Kwimbambano okanye ingxabano baya kumela bodwa de kube sekupheleni. Ayenamaqhinga, kodwa kuphela kwiimeko ezigqithiseleyo, xa umchasi engakwazi ukuqonda ngenye indlela. Ezi zimpawu zama ukungabonakali kwabanye.
Zama ukukhetha amagama ekunxibelelana nabo. Baxolelwa kalula, kodwa baya kukhumbula ukuhlambala ixesha elide. Abazi indlela yokuyichukumisa kwaye bona ngokwabo abakwazi ukuqonda iziphakamiso, ezibonisa ukuchaneka kwazo. "Kungcono inyaniso enenzondelelo kunamanga amnandi" - isiqubulo esenza ngayo ubomi.
Siyathemba ukuba kuya kuba lula kuwe ngoku ukuqonda abantu abangaqhelekanga nabaphikisanayo.
Ukuthanda ubudlelwane phakathi kwendoda nomfazi
Ungakulibala njani umthandayo, ukuba uyambona imihla ngemihla?
Ukuqiqa ngomxholo wabasebenzi besetyhini
Yintoni eya kuthi unyaka ka-2018 ibe yiNja zeCarcer